Toa ny tsy nisy fiatraikany teto amintsika ny Covid raha ny vinam-panjakana
vendredi, 01 janvier 2021 20:25
Sakeli-dalana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny fandalovan'ny Covid-19 nandritra ny 9 volana tamin'ny taona 2020, ary mbola mety hitohy izany amin'ity taona ity raha ireo firenen-dehibe hafa no jerena.
Samy nandray fepetra entitra ara-toekarena ny firenena maro, nanova ny paikady avokoa ireo mpahay toe-karena sy mpitondra maro maneran-tany.
I Madagasikara kosa, toa ny mahazatra ny mpitondra dia nisitrika tanaty fiherena ihany niandry ny fandalovan'ny rivodozan'aretina Covid-19, ka rehefa nahatsiaro fa afa-doza dia nivoaka ny trano ka nanohy ny fiainana an-davan'andro ihany.
Mitoy ny kabary fampanantenana, ny fanarenana ny fotodrafitrasa maventy sy tsy mbola natao nandritra ny 60 taona no himasoana, fa tsy misy fepetra miavaka. Azo antoka fa fitrosana sy fitadiavana famatsiana avy any ivelany, ary fiaraha-miasa fanjakana - tsy miankina na ny 3P (Partenariat Public privé), satria dia tsy hita any anaty sora-bolan'ny tetibolam-panjakana vao nolaniana ho an'ny taona 2021 izany nouvelle ville, na Tanamasoandro izany, ny tramway sy téléphérique atao eto Antananarivo, ny fanombohana ny autoroute mampitohy an'Antananarivo sy Toamasina.
Tsy misy maharatsy ny manamboatra fotodrafitrasa vaventy, satria dia anampy ny firenena izany, fa ao anaty krizy lehibe ny tokatrano tsirairay, tsy misy ho anina intsony ny tsirairay.
Tsy misy resaka ny fanohanana ireo orinasa efa miala aina ny ankamaroany, ny fambolena sy fiompiana, ny fitradrahana harena ambanin'ny tany aza zara raha nahazo teti-bola, midika fa ankinina amin'ny vahiny, izay 1% ihany ny an'ny Malagsy ary 99% ny an'ny vahiny raha ny lalàna ankehitriny.
Tsy misy fanapahan-kevitra mitondra mankany amin'ny fahaleovan-tena na fiandrihanam-pirenena ara-bola, tsy misy resaka sosialim-bahoaka, ny ny Kaly tsinjo nampanantenaina ho sakafo amin'ny vidiny 100ar isam-pokontany aza tsy nasiana tohiny.
Mazava ho azy, ny kabary rehetra dia mifototra amin'ny fanomezana avy amin'ny filoha na ny foibe avokoa, izany hoe ny faritra tompon'ny harena mangataka, ary ny foibe tsy manana na vary iray venty no mpanome. Tsy misy fa resaka an-javony ny fizarana andraikitra na ny fitsinjaram-pahefana fa ny "Omeko, omeko" hatrany aloha no misy.
Samia mandinika ny tohin'ny taona 2021, fa hoy Einstein : "Seuls les cons qui croient qu'en faisant la même chose, on aura d'autre résultat".